Momba anay - Hebei Shenli Rigging Co., Ltd.
Hebei Shenli Rigging Group dia manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana, ny famokarana ary ny fitsinjarana ireo vokatra fanodinkodinam-bokatra isan-karazany sy ny fitaovana fananganana any Sina ao anatin'ny 20 taona mahery.
Niorina tamin'ny taona 1998, ny orinasanay dia orinasa manampahaizana manokana amin'ny fampiakarana fitaovana sy vokatra ao anatin'izany ny laharana faha-80 hook, ny rohy 80 mampifandray, ny rohy 80 master, ny rojo 80, ny fonosana 80 ary ny fitaovana hafa fanaovana kilasy faha-80 sy naoty 100.
Ny orinasanay dia mitazona hatrany ny toerana voalohany eo amin'ny sehatry ny famokarana, ny teknolojia ary ny milina mandroso. Manana fitaovana sy fotodrafitrasa mihoatra ny 100 izahay, mihoatra ny andiam-pitsapana miisa 10 sy milina manara-maso mba hahazoana antoka ny habetsahana sy ny kalitaonay.
Izahay dia nandroso ny rafitra famolavolana 2D & 3D CAD, ny foibe famolavolana CNC ary ny rafitry ny laboratoara fanamafisam-peo matihanina. Manana fahaiza-manao famokarana R&D tanteraka izahay ho an'ny karazana vokatra hosoka hosoka sy vokatra sandoka hafa koa.
Ny orinasanay dia nanam-bola mihoatra ny orinasa 5 izay mamokatra antsamotady webbing, bloc roulant, kamiaona pallet tanana ary fitaovana fananganana hafa. Manana mpaninjara lehibe 600 mahery eo amin'ny tsena anatiny izahay. Nanangana sy namolavola ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena izahay nandritra ny 10 taona. Hatramin'izao, ny vokatra dia aondrana any amin'ny firenena sy faritra maro manerantany.
Ny orinasanay dia nandalo ny fanamarinana rafitra fitantanana kalitao ISO9001 tamin'ny 2010 ary ny mari-pahaizana momba ny rafitra fitantanana tontolo iainana ISO 14001 tamin'ny taona 2015. Ny vokatra varotra rehetra dia nandalo mari-pankasitrahana EU CE, anisan'izany ny rojom-pikatrohanay grade 80. Ny mari-pamantarana "JULI" dia nekena ho "CHINA FAMOUS BRAND" tamin'ny 2013 ary lasa mpikambana ao amin'ny "CHINA QUALITY SECRITY ENTERPRISE ASSOCIATION" izahay.
Ny orinasanay dia mikendry ny hanana fiaraha-miasa mandresy fandresena amin'ny mpanjifa manerantany. Ny mpiasa anay dia voavoly tsara, manana traikefa manan-karena amin'ny haitao sy amin'ny fanompoana fahalalana. Afaka manome anao ny torohevitra sy vahaolana matihanina izahay hanohanana ny fitakian'ny mpanjifa.
Ny vokatray dia nekena ho "PRODUKSA MORA HEBEI" ary ny mari-pamantarana "JULI" dia nekena ho "CHINA FAMOUS BRAND" tamin'ny 2013 ary lasa mpikambana ao amin'ny "ASSOCIATION ENTERPRISE ENTERPRISE CHINA QUALITY" izahay.